အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: အမှတ်တမဲ့များမှ...အမှတ်တရများစွာ
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:44 PM
ညီမလေး သံသာထက် မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ...
(၄) နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့များစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
နင်ဒီလိုအမှတ်တရလေးပို့စ်တင်ပေးတာ ကိုစိုးထက်ကြီးတော့ဝမ်းသာရှာမှာပဲ.... ကိုစိုးထက်သမီးလေးကလဲချစ်စရာလေးပဲနော်
ဒီကနေပဲဆုတောင်းပေးလိုက်တော့မယ် ညီမလေးသံသာထက်လေး....မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာ....ပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်လေးများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်....
အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိပဲ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ
တော့ ထာဝရ ရှိနေပါတယ်။ ကိုစိုးထက်နဲ့ မိသားစု အားလုံး
အဆင်ပြေပျော်ရွင်ပါစေဗျာ။ညီမလေး သံသာထက် လည်း
မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ကျန်း
မာပျော်ရွင် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ :)
ps ~ကိုစိုးထက်အတွက် အခုလိုအမှတ်တရ ပို့ စ်ရေးပေးတဲ့ ကိုဘလက် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲက လူတစ်ယောက် .... (သို့)
အမြဲတမ်းမဟုတ်တောင် ဘလော့ ဆိုတာ ရှင်သန်နေသ၍
ကိုကြီး စိုးထက်လည်း သူ့ကိုချစ်တဲ့ သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ
တည်မြဲနေမှာပါကွာ .. သူရဲ့ ဇနီးနဲ့ ချစ်လှစွာသော သမီး
နဲ့ ထာဝရ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် ....
ညီမလေး သံသာထက် လည်း မိသားစု အတွက် ...
ကမ္ဘာကြီးအတွက် အဖိုးတန်သော မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေဗျာ .... ဤမိသားစုလည်း ကမ္ဘာမြေ
တည်သ၍ ပျော်ရွှင်စေ ......
ကိုစိုးထက်ကြီးကို အစ်ကိုကြီးလို့ ခေါ်မှတော့ .... တူမလေးပေါ့ဗျာ... ကဲ တူမလေး သံသာထက် ရေ... အနာဂတ်လှပစွာနဲ့ နိုင်ငံတာဝန် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ထမ်းဆောင်နိုင်သော... ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော သမီးကောင်းသမီးမြတ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေကွယ်....
ကိုစိုးထက်ကြီးရယ် သိပ်မရှင်းနီးကြပေမယ့် သိနေခဲ့တာ ရှင်းနိုးနေခဲ့တာကြာပါပြီး ညီမလေး ဓါတ်ပုံရော အမကြီး၏ ဓါတ်ပုံရောဘဲ မြင်ဖူးပါတယ်။ ညီမလေးမွေးနေ့လည်းမှာ မိသားစုတစ်စုလုံး ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေလို ဒီနေရာလေးကနေ ထိုင်ပြီးဆုတောင်လိုက်ပါတယ်။
ချစ်တဲ့ဖေကြီးမေကြီးတို့နဲ့ တသက်သာမခွဲမခွါ ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ပါစေကွယ်
အကိုကြီးကိုစိုးထက်ကိုလဲ ညီမလေးတို့ အမြဲသတိတရရိုသေလေးစားလျက်ပပါနော်
သတီကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ အိမ်ကမေမေတို့ကို စိတ်မှန်းနဲ့ကန်တော့ရသလို မွန်တို့ အားကိုးကြည်ညိုရတဲ့ အကို့ကိုလဲ ရိုသေစွာကန်တော့ပါတယ် နော် အကို
Happy 4th Years Birthday, Than Thar Htet!!!
SMNTL X X
အချိန်တွေမြန်တယ်နော်။ သတိတောင်မထားမိလိုက်သလိုပဲ။ ကိုစိုးထက် သမီးတောင် နောက်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ။ ညီမလေးရေ Happy Birthday ပါနော်။ ဦးတို့ မိသားစုလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အဲ့ဒီ ကိုစိုးထက်ကြီးပေါ့ ကျနော်တို့ ကို လွမ်းအောင်လုပ်ခဲ့တာ အရင်ချိန်တွေကို သတိရမိတယ် မနက်မိုးလင်း ဘလော့လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုစိုးထက်ကြီးက ပြုံးစိစိနဲ့မောနင်းလို့နှုတ်ဆက် တစ်ခါခါတော့ နေ့ နဲ ညမှားတာပေါ့ ။အခုတော့ ဆီပုံးတွေမှာ အပြုံးမျက်နှာကိုမတွေ့ ရတာတော်တော်ကြာပြီးးးး အစ်ကိုကြီးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ညီမလေး သံသာထက်ရေ့ ပါးကွက်ကြားလေးနဲ့အမြဲတမ်းလှနေပြီး ချစ်သော ဖေ မေ နဲ့ဘ၀နေ့ ရက်များဖြောင့်ဖြူးပါစေဗျာ ။
Happy Birthday ညီမလေး
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေ ညီမလေး ၊ မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သမီးကောင်းရတာနာလေး ဖြစ်ပါစေ၊ အကိုကြီးတို့ မိသားစု ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အမြန်ဆုံးအတူတကွ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြပါစေခင်ဗျာ ။
အရမ်းရင်းနှီးခွင့်မရလိုက်ပေမယ့် ဝေလေး ဘလော့ကိုအစဦးဆုံး ကွန်မန့်ပေးပေးခဲ့တဲ့အစ်ကိုကြီး စိုးထက်ကို အမှတ်တရရှိနေပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေအစ်ကိုကြီးရေ
ညီမလေး သံသာထက်လည်း မွေးနေ့မှစ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေနော်.....
ံHappy Birthday ပါ သမီးလေးရေ..
Happy Birthday Nyi Ma Lay Than Thar Htet
Peace and sucees be upon you baby gril
ဘလော့လောကမှာ လေးစားအားကျရတဲ့ အစ်ကိုစိုးထက်ကြီး ရဲ့သမီးလေး ညီမလေး သံသာထက် မွေးနေ့မှစ၍ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ်အမှန်ဖြင့်ကို ဘ၀ကိုအောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
(ကိုရင်၊ ခင်လေး၊ ကလေးလေး)
ဘလော့ စရေးတော့ ကွန်မန့် လာပေးပြီး အားပေးတဲ့ ကျေးဇူးကို အမြဲ အမှတ်ရနေတာပါ...ကိုစိုးထက်ရေ... သံသာထက်ရေ "Happy Birthday " ပါနော်..
Shune Lai Yi said...
For Happy Birthday post of my daughter.
သမီးလေး မွေးနေ့ ပို့စ် အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ကိုဦး
ဖတ်ပြီး သတိရခဲ့ပါတယ် ကိုစိုးထက်။
ကျွန်တော်ရောက်လာတာတော်တော်တောင်နောက်ကျသွားတယ်။ ကိုကြီးစိုးထက်ရေခွင့်လွတ်ပါ။ မတွေ့တာလဲတော်တော်ကြာပြီနော်။ အစ်ကိုနဲ့တကွ အစ်ကိုမိသားစုများ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေဗျာ။ အစ်ကိုသမီးလေး သံသာထက် က ၄နှစ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့် ညီမလေးလို့ပြောရမလား တူမလို့ပြောရမလားပဲ။ နံမည်လေးကသံသာထက်ဆိုတော့ အသံလေးက သာသာယာယာလေးထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ပေးထားတာဖြစ်မယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
ကိုစိုးထက် နဲ့ မိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဒီမွေးနေ့လည်း နောက်ဆုံးမှ ရောက်ပြန်ပြီ..
:-) ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ပါစေ.. အနှောက်အယှက်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ..
အိုး.. မသိလိုက်ဘူး.. ချစ်စရာသမီးလေး ဘ၀တလျှောက် အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ
ကိုစိုးထက်ရဲ့ ပညာပြည့်ဝတဲ့ စကားတွေ နားထောင်ခွင့် သိခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ဟိုးအရင်က ချတ်ဖြစ်တာကို အမြဲ အမှတ်ရနေတယ်။ မတွေ့ရတာ လပေါင်း ကြာပေါ့။ ကိုယ်ပဲ မဖွင့်ဖြစ်လို့လားဆိုတာထက် ကိုစိုးထက်ပဲ မသုံးဖြစ်တာ နေမှာပါ။
နောက်အကျဆုံး မွေးနေ့ဆုတောင်းပဲ ထင်တယ်။
ညီမလေး သံသာထက် ဖတ်မိပါစေလို့...
ဘ၀ရဲ့ များပြားလှတဲ့ အနိမ့် အမြင့် ဆင်ခြေလျှောတွေမှာ အလိုက်သင့် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ...
ဘ၀တစ်သက်လုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်ပါစေ။